Montage ( 2013 ) | MM Movie Store
၂၀၁၆ မှာ Montage ရုပျရှငျကားကိုပဲ Hindi မှာ Offciallyပွနျလညျရိုကျကူးခဲ့ပါသေးတယျ။ ဇာတျလမျးလေးကတော့ပွနျပေးဆှဲသမားတဈဦးဟာ လှနျခဲ့သော၁၅နှဈတညျးက သဲလှနျစတဈစုံတဈရာမကနျြခဲ့ပဲ ပြောကျဆုံးသှားခဲ့ပါတယျ။
အမှုရဲ့နောကျကွောငျးမပွနျရ ကာလပွညျ့ဖို့ ၅ရကျအလိုမှာ တဈစုံတဈယောကျဟာအခငျးဖွဈပှားရာနရောမှာ တိတျတဆိတျ ပနျးပှငျ့လေးတဈပှငျ့ကိုထားသှားခဲ့ပါတယျ။ ရကျပေါငျးအနညျးငယျအကွာမှာ တူညီတဲ့ပဈမတျြမှာပဲ တူညီတဲ့ ပွနျပေးဆှဲမှုဟာ တူညီသော နညျးလမျးကိုအသုံးပွုပွီးတော့ ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။
ရဲတပျဖှဲ့ဟာ ၎င်းငျးရဲ့ရှမှေ့ာဖွဈပှားခဲ့တဲ့ အမှုကို နောကျကွောငျးမပွနျရကာလအတှငျးမရောကျရှိသေးမီ အလငျြအမွနျဖွရှေငျးနိုငျဖို့ ဆောငျရှကျကွပါတော့တယျ။စုံထောကျ Kim Sang-kyun ဟာ အကွံဉာဏျရယူခဲ့ပွီးတော့အဆိုပါအမှုကို တူညီတဲ့ အမှုအဖွဈ အတညျပွုလိုကျပါတယျ ။
နောငျအခါမှာ အဆိုပါကိစ်စဟာ ကလေးရဲ့ အဘိုးဖွဈသူSong Young-chang ဟာ လှနျခဲ့သော ၁၅နှဈက ပွနျပေးဆှဲမှုရဲ့တရားခံဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ဆကျလကျပွီးတော့ဒီပွနျပေးဆှဲအမှုဟာ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈကွဦးမလဲ?အမှုမှနျကကော ပျေါပေါကျနိုငျပါ့မလား? စသဖွငျ့စိတျဝငျစားဖှယျအကွောငျးအရာမြားကို ဆကျလကျရှုစားကွရမှာဖွဈပါတယျ။
မှုခငျးဇာတျကားကောငျးကို သဘောကနြှဈခွိုကျသူတို့ရငျထဲထိသှားစမှောပါ။ တောငျကိုရီးယားမှာဤရုပျရှငျကားကိုမလေ ၁၆ရကျ ၂၀၁၃ မှာ ပွသခဲ့ပါတယျ ၁၁၉မိနဈခနျ့ကွညျ့ရှုခံစားရမှာပါ။ဤ ရုပျရှငျကားနဲ့ ၂၀၁၃ နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ ထူးခြှနျဆုမြားကိုလညျး ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။IMDb 7.4 ရထားတဲ့ဇာတျကားလေးနဲ့မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ
ဇာတျလမျးအညှနျးကတော့တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှ ၂၀၁၃ ခုနှဈမှာ ဖနျတီးရိုကျကူးထားတဲ့မှုခငျးရုပျရှငျကားကောငျးတဈကား ဖွဈပါတယျ။Uhm Jung-hua , Kim Sang-kyun နဲ့ Song Young-chang တို့ကိုအဆိုပါ Thriller Movie ရဲ့ အဓိကဇာတျဆောငျ အနနေဲ့ မွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၆ မှာ Montage ရုပ်ရှင်ကားကိုပဲ Hindi မှာ Offciallyပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ပြန်ပေးဆွဲသမားတစ်ဦးဟာ လွန်ခဲ့သော၁၅နှစ်တည်းက သဲလွန်စတစ်စုံတစ်ရာမကျန်ခဲ့ပဲ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
အမှုရဲ့နောက်ကြောင်းမပြန်ရ ကာလပြည့်ဖို့ ၅ရက်အလိုမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာ တိတ်တဆိတ် ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုထားသွားခဲ့ပါတယ်။ ရက်ပေါင်းအနည်းငယ်အကြာမှာ တူညီတဲ့ပစ်မျတ်မှာပဲ တူညီတဲ့ ပြန်ပေးဆွဲမှုဟာ တူညီသော နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ၎င်းရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အမှုကို နောက်ကြောင်းမပြန်ရကာလအတွင်းမရောက်ရှိသေးမီ အလျင်အမြန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ကြပါတော့တယ်။စုံထောက် Kim Sang-kyun ဟာ အကြံဉာဏ်ရယူခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါအမှုကို တူညီတဲ့ အမှုအဖြစ် အတည်ပြုလိုက်ပါတယ် ။
နောင်အခါမှာ အဆိုပါကိစ္စဟာ ကလေးရဲ့ အဘိုးဖြစ်သူSong Young-chang ဟာ လွန်ခဲ့သော ၁၅နှစ်က ပြန်ပေးဆွဲမှုရဲ့တရားခံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပြန်ပေးဆွဲအမှုဟာ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြဦးမလဲ?အမှုမှန်ကကော ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါ့မလား? စသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကို ဆက်လက်ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှုခင်းဇာတ်ကားကောင်းကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်သူတို့ရင်ထဲထိသွားစေမှာပါ။ တောင်ကိုရီးယားမှာဤရုပ်ရှင်ကားကိုမေလ ၁၆ရက် ၂၀၁၃ မှာ ပြသခဲ့ပါတယ် ၁၁၉မိနစ်ခန့်ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။ဤ ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ ၂၀၁၃ နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ထူးချွန်ဆုများကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။IMDb 7.4 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဖန်တီးရိုက်ကူးထားတဲ့မှုခင်းရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။Uhm Jung-hua , Kim Sang-kyun နဲ့ Song Young-chang တို့ကိုအဆိုပါ Thriller Movie ရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင် အနေနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။